Fantaro ny fotoana laninao amin'ny tetikasanao amin'ny fampiharana Tyme 2 ho an'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Fantaro ny fotoana laninao amin'ny tetikasanao amin'ny fampiharana Tyme 2 ho an'ny macOS
Javier Porcar | | Mac App Store, maro
Tyme 2 dia a fampiharana tonga lafatra ho an'ireo izay mila mahafantatra ny fotoana atokantsika ho an'ny tetikasa tsirairay. Ireo mpahay toekarena, mpisolovava, mpahay siansa, matetika tsy fantatrao ny fomba tokony handoavan'izy ireo vola amin'ny mpanjifany, satria sarotra ny mahafantatra ny fotoana natokanao ho an'ny tetikasa iray.
Amin'ny Tyme 2 dia mora kokoa izao. Iray amin'ireo rindranasa minimalista ireo, izay miafina amin'ny macOS izay mamela, noho ny asany sy ny fomba fiasany, fantaro ny ora marina nanokanay ho an'ny tetikasa amin'ny fomba tsotra, nefa miaraka amin'izay mahomby.
Aorian'ny fametrahana ny rindranasa dia tsy maintsy ampiharintsika ny fampiharana miaraka amin'ireo lahasa izay ataontsika. Manana timer mora azo izahay, hanombohana sy hampiatoana azy ireo rehefa ilaina ary handrefesana ny fotoana laniana. Rehefa manana tetikasa maromaro noforonina isika dia afaka mahazo topimaso momba azy ireo ary mahita ny fotoana niasana tamin'ny tsirairay tamin'izy ireo.
Fampiasana iray hafa tena manan-danja dia ny fahafahan'ny ampio fotoana ny vinavinan'ny tetikasa, ho an'ny fifehezana ny ambin'ny tetikasa, ary koa fe-potoana fanaterana ny tetikasa. Azo atao ny mifehy ny fotoana laniana amin'ny fanatanterahana tetikasan'ny ekipa. Noho izany, fampiharana tsara ny fahalalana ny fotoana laniana amin'ny tetikasa iray ataon'ny mpiara-miasa tsirairay.
Ny Time 2 dia hita ao amin'ny baran'ny menio. Avy any dia mora tokoa ny miditra amin'ireo fiasa miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry, manomboka timer.
Mora ny mahita tetik'asa vita sy mampiditra fampahalalana mifandraika amin'izany. Fomba iray tena sarobidy koa ny fahefana sivana ireo tetik'asa na zahao amin'ny toetra manokana.
Farany, tena tsara ilay interface, samy ho an'ny asanao isan'andro sy hanehoana amin'ny antoko fahatelo ny vaovao voaangona. Ary koa, raha mila mandefa ny fampahalalana ianao dia afaka manao izany hatrany fanondranana ny fampahalalana amin'ny PDF.
Izy io dia manana kinova ho an'ny macOS sy iOS ary ny fampahalalana dia ampifandraisina amin'ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny iCloud na Dropbox. Download maimaimpoana ny kinova macOS amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fividianana fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Fantaro ny fotoana laninao amin'ny tetikasanao amin'ny fampiharana Tyme 2 ho an'ny macOS
Tombano sy tantano ny bateria MacBook-nao amin'ny Battery Mask
"Ahoana no fomba ahazoana tombony betsaka indrindra amin'ny HomePod", horonantsary farany nataon'i Apple tamin'ny mpandahateny anao